Yakatangisa tirera yemwaka wechipiri we "Ted Lasso" iyo inotanga muna Chikunguru 23 | IPhone nhau
«Ted lassoZvaiita kunge imwe yeaya chaiwo akateedzana ayo akaitwa nemaAmerican kumaAmerican. Uye chokwadi ndechekuti kwave kuri kubudirira kukuru pasirese. Iri stellar basa raJason Sudeikis iro rakaisa munhu wese muhomwe, vadikani kana kwete veAmerican neEuropean nhabvu.
Uye mushure mekubudirira kwemwaka wekutanga, isu tatova neturera uye zuva rekuburitsa rechipiri. Ichave iyo 23 yeJuly. Saka isu tichaenderera mberi nekushanya kwemurairidzi anosetsa imwe mwaka.
Isu tanga takamirira mwaka wechipiri we hit American comedy nhepfenyuro "Ted Lasso" kwenguva yakareba. Akatoseka nekutaura kwa Tim Cook panguva yaApple yaApril chaiyo.
Mwaka wechipiri, unozove ne 12 zvitsauko, ichatanga kuratidzwa paApple TV + muna Chikunguru 23. Iyo kambani yasimbisawo nhasi zuva rekuratidzwa kwemwaka wechipiri we "The Morning Show", ichave iri gare gare: Gunyana 17.
Iwo "Ted Lasso" akateedzana Jasoni Sudeikis, yakasarudzwa uye yakapihwa muakawanda mibairo kubva pasirese yeterevhizheni, kusanganisira iyo Golden Globe yemutambi uyo anotamba semurairidzi Ted Lasso.
Mutambo unotapira uyo mwaka wavo wekutanga wapinda mudzimba dzemamirioni evaoni ve Apple TV + semhepo yekufema mweya mutsva kurwisa mazuva anonetesa edenda ratakararama naro kwemwedzi yakawanda.
Neraki isu tichakwanisa kunakidzwa nemwaka wechipiri pamwe netariro yakawanda ine tariro, uye nekudzoka kune zvakajairika izvo isu tinazvo kuseri kwekona.
Parizvino, isu ticha tarisa iyo tirera yemwaka wechipiri iyo Apple ichangoburitsa pane yako account YouTube apo isu takamirira kuratidzwa kwezvikamu zvitsva zvemurairidzi wenhabvu nezviitiko zvake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Takaburitsa tirera yemwaka wechipiri we "Ted Lasso" iyo inotanga muna Chikunguru 23